Ithegi: uqikelelo » Martech Zone
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Rhoqo kwiintsuku ezimbalwa, mna nentombi yam sixabana ngokuba ngubani na onentambo yokutshaja. Ndiyirhalela intambo yam kwaye uhlala eshiya intambo yakhe emotweni yakhe. Ukuba iifowuni zethu zombini ziphantsi ukuya kwipesenti enye yeshajithi… jonga! Iifowuni zethu ziye zaba yinxalenye yomntu wethu. Zizihlunu zethu zokudibanisa kubahlobo bethu, irekhoda yethu yangoku, umhlobo wethu osikhumbuza ngento emasiyenze ngokulandelayo, nkqu
Iindlela zokuThengisa ngeDijithali kunye noQikelelo ngo-2014
NgeCawa, nge-5 kaJanuwari 2014 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Ndiyaqonda ukuba kukho uphindaphindo apha kunye nezinye zezithuba ebendisabelana ngazo apho ndikholelwa ukuba abathengisi kufuneka bajonge kulo nyaka… kodwa le infographic iyishwankathela kwaye yayintle kakhulu ukuba ingabiwa! Unyaka ka-2014-ukuthengiswa kwedijithali kufikelele kwinqanaba elitsha kwaye kuyaqhubeka ukwenza njalo. Nangona kunjalo, abanye abathengisi basazibuza - “Zeziphi izinto eziza kuba nefuthe kwiinzame zam zokuthengisa kulo nyaka kwaye
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ngaba lo nyaka ukufunxile? Yenzele mna. Kwakungunyaka onzima njengoko ndaswelekelwa ngutata, impilo yam yahlupheka, kwaye ishishini lalinezinto ezimbi-kubandakanya ukwahlukana nomhlobo omkhulu kunye nogxa wam. Nina bantu nifunde ibhlog yam ngolwazi lokuthengisa ngoko andifuni kugxila kweminye imiba (nangona ibinempembelelo enkulu), ndifuna ukuthetha ngqo kwiTekhnoloji yeNtengiso kunye neNtengiso. Ukuthengisa ngo-2013
Uqikelelo lweGartner lweeTekhnoloji ezi-10 eziPhezulu zango-2011
Lwesine, Disemba 9, 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Kuyathakazelisa ukufunda ukuqikelela kukaGartner kweetekhnoloji ezili-10 eziphezulu zonyaka ka-2011…. Nokuba inkqubela phambili kugcino kunye nakwizixhobo zokusebenza zichaphazela ubuchule beenkampani ukuba zinxibelelane okanye zabelane ngolwazi kunye nabathengi kunye nethemba ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. Iitekhnoloji eziShumi eziPhezulu ze2011 Cloud Computing ka-XNUMX -Iinkonzo zekhompyuter zamafu zikhona kumacala ahlukeneyo ukusuka kuluntu oluvulekileyo ukuya kubucala oluvaliweyo. Iminyaka emithathu ezayo iya kubona ukuhanjiswa
Ngo-2010: Hluza, Zenzele, zilungiselele
NgoMgqibelo, Disemba 12, 2009 NgoLwesihlanu, Julayi 27, 2018 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Sixakwe lwazi olusuka kwimidiya yoluntu, ukukhangela kunye ne-inbox. Imiqulu iyaqhubeka nokunyuka. Andinamthetho ungaphantsi kwe-100 kwibhokisi yam engenayo yokuhambisa imiyalezo kunye nezilumkiso ngokufanelekileyo. Ikhalenda yam ingqamanisa phakathi kweBlackberry, iCal, iKhalenda kaGoogle kunye neTungle. NdineGoogle Voice yokulawula iifowuni zeshishini, kunye ne-YouMail ukuphatha iifowuni ngqo kwifowuni yam. UJoe Hall ubhale namhlanje ukuba iinkxalabo zabucala kunye nokusetyenziswa kwedatha ebhalwe igama lakho nguGoogle